नेपालकै बज्रबाराहीमा गजुर किन नराखिइको होला ? मान्दिरमा किन घण्टी राखेका हुन्छन ? – सुदूरखबर डटकम
वैज्ञानिक कारण – मन्दिर प्रवेश गरेसँगै घन्टी बजाउँदा मनलाई सफा र जागरुक बनाउँछ । साथै, ध्यानलाई पुर्ण रुपमा केन्द्रित गर्दै भक्तितिर आकर्षित गर्दछ । प्राय : घन्टी लामो र तिखो आवाज आउने गरी बनाइएका हुन्छन् जसको प्रतिध्वनी कम्तीमा सात सेकेन्सम्म सुनिन्छ । प्रतिध्वनिको समयावधिले हाम्रो शरीरका सातैवटा रोगनिवारक केन्द्रलाई सक्रिय बनाउँछ । जसले मस्तिष्कमा रहेका सबैखाले नकारात्मक विचार हटाउन मद्दत गर्छ भन्ने वैज्ञानिक मान्यता छ ।
बज्रबाराही देवीको मन्दिरमा गजुर नभएकै कारणले यो ठाउँमा मानापाथी भर्दा वा माना पाथीको हिसाब गर्दा झुसी भर्न नहुने परम्परा कायमै छ । अहिलेको मुलुकी देवानी संहितामा पनि ठूली पाथी र सानी पाथीबारे उल्लेख छ ।बज्रबाराही बाहेक काठमाडौंमा रहेको मरुगणेश (अशोक विनायक)को मन्दिरमा पनि गजुर राख्न नहुने मान्यता छ ।